Cristiano Ronaldo oo codkiisa u diiday Lionel Messi, saddexdii xiddig ee uu u codeeyey abaal-marinta FIFA The Best oo daaha laga rogay – Gool FM
(Milan) 24 Sebt 2019. Waxaa xalay Magaalada Milan ee dalka Talyaaniga lagu bixiyey abaal-marinno dhowr ah oo ay ka mid tahay midda xiddiga sanadka ee FIFA The Best.
Waxa uu Lionel Messi abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA ku garaacay Cristiano Ronaldo iyo Virgil van Dijk.
CR7 ayaa codkiisa u diiday Lionel Messi waxaana uu u codeeyey saddex xiddig oo kale, halka kabtanka Barcelona iyo xulka qaranka Argentina uu codkiisa siiyey Cristiano Ronaldo.
Waxaa Abaal-marintan codeeya kabtanada iyo tababarayaasha xulalka qaranka iyo sidoo kale suxufiyiin mataleysa wadamada caalamka oo dhan.
Lionel Messi ayaa codeyntiisa waxa uu doorashada koowaad ka dhigay Sadio Mane, iyadoo doorashadiisa labaad uu ahaa Cristiano Ronaldo, halka doorashadiisa saddexaad uu ka dhigtay Frenkie de Jong.
Laakiin kabtanka xulka qaranka Portugal ee Cristiano Ronaldo sidaas oo kale ma yeelin oo kuma soo dirin Lionel Messi saddexda ciyaaryahan ee uu codkiisa siiyey, waxaana uu doortay laacibka ay Juventus wada joogaan ee Matthijs de Ligt, De Jong oo ka tirsan Barcelona iyo Kylian Mbappe oo metela PSG.
Si kastaba ha ahaatee, dhinacakale Van Dijk ayaa doorashadiisa koowaad ee codkiisa ka dhigtay Lionel Messi, waxaana uu kabtanka Holland uu labada boos ee kale u codeeyay saaxiibadiisa ay kawada tirsan yihiin Liverpool ee Mohamed Salah iyo Sadio Mane.
Yeelkeede, Messi oo helay 46 dhibcood ayaa markiisii lixaad ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee FIFA, halka daafaca Liverpool ee Van Dijk oo helay 38 dhibcood uu ka soo muuqday kaalinta labaad, waxaana uu labo dhibcood ka sarreeyaa Cristiano Ronaldo oo helay 36 dhibcood kuna dhammaystay kaalinta saddexaad.